Xukuumadda Siilaanyo Yaanay ku Khaatumo Seegin ku Gabood-falka Sharciga Iyo Warbaahinta Madaxa-bannaan | HAYAAN NEWS
Xukuumadda Siilaanyo Yaanay ku Khaatumo Seegin ku Gabood-falka Sharciga Iyo Warbaahinta Madaxa-bannaan
Bisinka Alle iyo tiir bir ah ayeynu cuskanay, rabbina waa inna garan-siiyey, intaas aynu raacinno. Illaahayow na nabad-geli oo adigu tubta kheyrka leh na waafaji, Xukuumaddeennan sii socotanna ee Shar badanna harraatiddeeda naga du’ oo xaqa garan-sii, ta soo socotanna toobiyaha san noogu haaji. Intaasi waa iga Duco iyo aarraar.
21-kii bishan aynnu ku jirno ee November oo ku beegnayd Maalin Isniin ah gelintii danbe, abbaaro 4:00 galabnimo, waxay Guddiga doorashooyinka Somaliland ku dhawaaqeen Natiijadda doorashaddii loo dareeray 13-kii bishan November oo iyadduna ku beegnayd Maalin Isniin ah. Doorashaddaas waxa ku guulaystay oo loogu dhawaaqay Murrashaxa Madaxweyne ee Xisbiga KULMIYE Mudane, Muuse Biixi Cabdi oo noqday Madaxweynihii Shannaad ee Somaliland yeelato.
Cadiqani Cabdilaahi Axmed (Asporo)
Abdiqani A. Ahmed (Asporo)